Tin Inogona Kusarudzwa neKushandisa Fekitori, Vatengesi - China Tin Inogona Kusarudzwa neKushandisa Vagadziri
Tsika Kudhinda Kisimusi Kushongedza Tin Bhokisi YeChipo & Kukwidziridzwa
Tsanangudzo Chigadzirwa Izita Tsika Kudhinda Kisimusi Shongedzo Tin Bhokisi YeChipo & Yekusimudzira Chinyorwa Chekutanga-kirasi tinplate Ukobvu 0.23 ~ 0.35mm Model Yakavapo Dhirivhari Nguva mazuva makumi maviri Zvitupa ISO9001, SEDEX, SGS, Mcdonald, BV, Disney MOQ 1500 pcs Kushandisa Chipo & Kusimudzira Usati watumira kubvunza, ndapota inzwa wakasununguka kuverenga anotevera manotsi: 1. Aripo muyenzaniso kwauri ruzivo ndeye mahara. 2.Yako dhizaini yemifananidzo sampuro inoda kubha ...
Chigadzirwa Chigadzirwa 5L Olive Oiri Tin Cans Tin Matafura Olive Oiri Tin Makani Kukura Cap epurasitiki telescopic chivharo spout, epurasitiki mubato Unyanzvi 5L Kukura 168 * 105 * 300mm (H) Ukobvu 0.25mm Kurema 453g Zvinhu zvekudya giredhi tinplate Rakaundi rectangle Kudhinda CMYK, yakasarudzika ruvara kudhinda MOQ 5000pcs Miripo yekubhadhara T / T 30% pamberi. Uye iyo bhalansi isati yatumirwa Kuisa Port Shenzhen kana Guangzhou Nguva yekuendesa ...
Empty Popcorn Tin uye Snack Cans ye Wholesale Tapered yeNesting uye Shipment Byland Inogona kugadzira yakanakisa mhando Popcorn Mata muindasitiri yezvikafu zvekudya uye mabhasiketi echipo. Matinji ndiwo akanakisa tsamba yekuraira chipo mhinduro! Kwemakumi emakore vanga vari ivo vanopa-vanopa zvipo kune zororo. Isu tine stock stock mune akati wandei akagadzirwa dhizaini- Kisimusi uye ese-chiitiko, pamwe neakasimba mavara makani. Yedu hombe tapered uye yakatwasuka mativi Popcorn Matinji akanaka kune mbatatisi machipisi, p ...